DFS oo ka tacsiyeeysay geerida ku timid Cabdi Cali Bacalwaan. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	DFS oo ka tacsiyeeysay geerida ku timid Cabdi Cali Bacalwaan.
DFS oo ka tacsiyeeysay geerida ku timid Cabdi Cali Bacalwaan.
Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, mudane Cismaan Abokor Dubbe ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiyeeyay geerida fanaankii qaranka Allah u naxariistee, Cabdi Cali Bacalwaan oo ku geeriyooday dalka Jarmalka.
Fanaanka wuxuu muddo isbitaal ugu jirey xanuun la xiriira dhanka neefmareenka oo ugu dambeyn u geeriyooday, dhakhaatiirta la tacaaleysay Cabdi Cali Bacalwaan waxay sheegeen in uu haleeley xanuunka safmarka ah ee COVID-19.
Wasiirka Cismaan Dubbe, ayaa sheegay in fanaanku kamid ahaa hal abuurada ugu waa weynaa oo qaranka u soo hurey wax kasta isla markaana dhaxal lama ilaabaan ah uga tagay dadka Soomaaliyeed.
Allaha u naxriistii Bacalwaan waxaa uu ka mid ahaa tiirarkii Hobalada Waabari isaga oo ku luuqayay heeso tiro badan oo isugu jira Jaceyl iyo Wadani, waxaana uu ahaa Fannaan siweyn ay dadku codkiisa u jeclaayeen.
DFS oo ka tacsiyeeysay geerida ku timid Cabdi Cali Bacalwaan. was last modified: December 24th, 2020 by Admin
Dad badan oo lagu dilay galbeedka Itoobiya
Hay’adda Caafimaadka Dunida oo sheegtay in mudo labo sano ah looga hortagi karo Covid-19
Dhageyso:-Barnaamijka Diirada Ku Saari Doonna Baahiya Caruurta inta Lagu Jiray Abaarta Qibtii 4aad
Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka Baarlamanka labaad ee Galmudug oo diyaarinaya habraaca doorashada.
AKHRISO:Sawirro:Ra’iisul Wasaare Kheyre oo maanta xafiiska kala wareegay Cumar C/rashiid
Wararkii u dambeeyay xaalada Magaaladda Addis Ababa
Guddiga farsamadda soo xulista Barlamaanka labaad ee Hirshabelle oo gaaray Magaalada jowhar
Xildhibaannada Golaha Shacabka Akhrinta 2aad Marsiiyay Hindise Sharciyeedka Hay’adda Socdaalka “SAWIRRO”
DHAGEYSO:-WARBIXIN BIYO YARIDA IYO CEELASHA BAYDHABO KU YAALA JECEELOW